SomaliMeMo oo heshay shax Milateri oo ay dejisay AMISOM si ay ugu qabsato magaalada Muqdisho iyo ciidamo taabacsan DKMG-ka oo si qarsoodi ah ku jooga deegaanada ay Mujaahidiintu ka maamulaan magaalada Muqdisho.(Warbixin dheer oo Xasaasi ah). | Halganka Online
Wilaayada Gobolka Banaadir Ee Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab Oo Shaley Heshiis kala Dhax Dhigay Qaar kamid ah Beelaha Wada Dega Gobolka Banaadir. SAWIRO
Wilaayada Islaamiga Ee Jubooyinka Oo Riyo Ku Tilmaamay Kuwa Sheegtay Inay Maamul Goboleed ay Ugu Magac Dareen koonfurta Soomaaliya U Dhisayaan
Beesha degta degmada qansax dheere ee gobolka Baay oo hubkeeda ku wareejisey wilaayada Islaamiga ah ee Baay iyo Bakool.
Shabakadd Wararka SomaliMeMo waxay Akhristayaasheeda Sharafta leh usoo gudbinaysaa Warbixin sir ah oo ku saabsan qaabkii ay DKMG-ka iyo AMISOM u qorsheeyeen Duulaan balaaran oo ka dhanka ah Shacabka Muqdisho iyo xoogaga Mujaahidiinta ah. Madaxtooyada Villa Somaliya ayaa waxaa ku aruuray dhamaanba wixii Jawaasiis ahaa iyo kuwii Calooshood u shaqaystayaasha ahaa kuwaas oo si sahal ah u fakiya wax walba oo ay maleegaan Saraakiisha DKMG ah iyo kuwa AMISOM.
Haddii aad war uga baahato Villa Somaliya ha ahaado warkaasi mid muhiim ah iyo mid kalabee si fudud ayaad ku heli kartaa waana arinta heerkaan soo gaarsiisay DKMG-ka ah.
Ciidamada Dowladda,Wasiirada Xukuumadda,Howlwadeenada Warfaafinta,Saraakiisha AMISOM, ayaad si fudud wixii aad rabto uga heli kartaa.
Musuq Maasuq iyo is aaminaad la’aan baahsan ayaa dhulka la degtay DKMG-ka ah oo runtii dhinac walba ka nugul waxa kaliya ee ay meesha ku hayaana ay tahay Awoodda Booc Booca ah ee shisheeyaha AMISOM.
Shabakadda SomaliMeMo oo looga bartay helidda xogaha sirta ah ayaa soo heshay kaarto dhamays tiran oo ay Dejiyeen Saraakiisha DKMG-ka ah,AMISOM,CIA-da Maraykanka iyo Shirkadda Black Water, kaartadaan ayaa ah mid khatarteeda leh marka dhinacyo badan laga fiiriyo balse inteedi badnayd ayaa u muuqata Hal Bacaad lagu lisay.
Axadii la soo dhaafay shir Muhiim ah oo waqti badan qaatay oo aan loo kala kicin oo ay yeesheen Saraakiisha ugu saraysa DKMG ah iyo AMISOM ayaa lagu dejiyey qorshayaal dagaal oo si fudud loogu jiiro karo xoogaga Mujaahidiinta ah ee dalkii oo dhan qabsaday.
Shariif Sheekh Axmed oo Dowladiisu fashilantay ayaa si aad ah u danaynayey in mar uun Dowladiisu ka taliso degmooyinka Muhiimka ah ee magaalada Muqdisho gaar ahaan deegaanada ay Beeshiisu ka soo jeedo.
AMISOM iyo shisheeyaha kale ayaa ayaguna leh Hammi intaa ka wayn oo ah in dhamaanba Muqdisho laga ciribtiro maamulada Islaamiga ah ee Shacabka ku dhaqa shareecada ee ay Mujaahidiintu Hormuudka ka yihiin.
Qorshahan ka dhanka ahaa Mujaahidiinta ayaa waxaa ku midaysnaa dhinac walba oo xumaan doon ah waxaana laga dheehan karay arrimo Qabiil,mid Diineed,mid Deegaan iyo khiyaamooyin kale oo badan.
Howl-galkan ayaa ahaa mid Qaabkaan loo dejiyey:
1-Waqooyiga magaalada Muqdisho ayaa waxaa Howlgalkeeda loo xil saaray Saraakiisha DKMG-ka ah ee ka soo jeeda Beesha Mudulood iyo Ciidamada AMISOM oo adeegsanaya awoodii ugu dambaysay.
2-Koonfurta Muqdisho sida Hodon,Hawl Wadaag,Wardhiigleey ilaa Jidka warshadaha ayaa waxaa loo xil saaray saraakiisha DKMG-ka ugu jira Beesha Habar Gidir iyo ciidanka Burundi iyo ciidan qarsoon oo DKMG-ka u joogo deegaanada ay Mujaahidiintu maamulaan.
Fashil ku yimd qayb ka mid ah qorshahaas iyo mid kaloo weli harsan:
Markii ay dhinacyada cadawga ahi sidaasi wax iskula meel dhigeen ayaa loo dhaqaaqay fulintii qorshahaas khatarta badan, Galabnimo Arbaca ah ayey Ciidamada Calooshood u shaqaystayaasha ah ee AMISOM waxa ay bilaabeen in ay diyaariyaan dhammaan dhinacyadii ka qayb qaadan lahaa howl gallada.
Beesha Mudulood iyo dagaal oogayaasheedii ayaa AMISOM u sheegay in ay dhankoodu diyaar yihiin Sidaas daraadeed habeenimadii ay Khamiistu soo gelaysay ayey shariif sheekh Axmed waxa ay u xireen Dareeska ciidanka waxayna ku daba safteen Taangiyadii AMISOM.
Salaad Cali Jelle,Max’med Dheere,C/Qaadir Soomow iyo Muxiyadiin Xasan Afrax ayaa waxa ay ku sugnaayeen Hotel “Nasahablood Two” waxayna shirinayeen Horjoogayaasha beesha si subaxnimada Khamiista ah Barqanimadeeda loogu shaah cabo Kaaraan ilaa Isgoyska Fagax.
Habeenkaas indho la iskuma keenin, saqdii dhexe markii ay ahayd ayuu Shariif oo Tuute Xiran waxa uu u sheegay Generalka ugu sareeya ciidamada Uganda in Beeshiisa Mudulood ay diyaar u tahay in ay Taangiyada u hogaamiso dagaalka.
Aroortii hore subaxnimadii ayey dagaalka galeen Taangiyada Ciidanka Yugaandha iyo Maleeshiyaad tirayar oo ka socday dagaal Oogayaasha ku howlgelayey magaca beesha balse markii weerarkii ugu horeeyey ay ku jabeen ayey Maleeshiyaadkaasi cagaha wax ka dayeen waxayna tageen Xamar Weyne iyagoo ku marmarsiyoonaya in ay adkaynayaan Ammaanka Mudaaharaad uu qaban qaabiye ka ahaa Salaad Cali Jelle oo Xamar Weyne ka dhacayey.
Shariif ayaa isagoo Tuute qaba lagu arkay meel ku dhaw dhismaha Baarlamaankii hore halkaas oo uu sawirro ku gelayey, waxaa sii xoogaystay dagaalkii oo ay ku jireen Taangiyada Yugaandha, Ciidankii Shabaabul Mujaahidiin ayaa ayaga oo Allaah kaashanaya waxa ay adkaysteen difaacyadoodii Foodana waa lagelin waayey.
Markii ay saacadu gaartay 11:30 Barqanimo ayaa waxaa god ku dhacay Taangi ay ciidanka Yugaandha ku soo dagaal galeen 12:30-kii duhurnimana waxaa lagubay Taangigii 2-aad.
Xaalku wuu xumaaday dhulkii ay dagaal oogayaashii magaca Mudulood ku dagaal galayey ay xorayn lahaayeena foodda waa lagelin waayay, Shariifkii Villa Somaliya ayuu u cararay kadibna intii uusan gaarin Villo Somaliya ayaa loo sheegay in Kursigiisii la qarxiyey.
Qorshihii wuxuu noqday mid Maroodi Bariijiyey, saaxadii dagaalkana waxaa ku kaliyoobay ciidanka Yugaandha iyo Shabaabul Mujaahidiin, Mujaahidiintii weerarka lagu ahaa aroortii hore ayaa galabnimadii weerar laba afla ah qaaday waxayna gacanta ku dhigeen Taangigii gubnaa iyo Maydadkii Yugaandha.
4:00-tii Galabnimo Yugaandhiiskii iyo Dagaal oogayaashii ku dagaal galayey magaca Mudulood waxay isku nacladeen Dekadda Muqdisho iyo Xamar Weyne mid walbana midka kale ayuu nacladayey waxaana la sheegay mar marka qaar in la dharbaaxayey Salaad Cali Jelle iyo Max’med Dheere.
Guushii waxay raacday ciidankii Allaah Diintiisa u dagaalamayey, ciidankii Sheydaanka ee qabiilka iyo gaalnimada watayna waa laga adkaaday sidaasna waxaa ku fashilmay wejigii hore ee qorshaha oo ahaa kii lagu han weynaa.
Akhriste Xusuusnow deegaanada Beesha Mudulood loo nisbeynayo waxaa Dhammaantood maamula Mujaahidiinta kumana sugna wax Jawaasiis ah oo laga shakisanyahay sidaas ayaana keentay in si sahal ah loo difaaco deegaanadaas.
Ururka Xisbul Islaam oo magacooda dad qaarkiis ay isku qariyaan taako kama joogaan Waqooyiga magaalada Muqdisho waana mida caqabadda ku noqotay Isbahaysatada in ay waayaan dad ay ku dhax yeeshaan Mujaahidiinta deegaanadaasi.
Qeybta 2-aad qorshaha weli dhiman iyo Caqabadaha:
Isla galabtii Arbacada ayey guddigii isaga ahaa ee qorshaha dejiyey waxay u tageen Saraakiishii beesha Habar Gidir ugu jirtay DKMG-ka oo la doonayey in ay horkacaan ciidanka Burundi, waxaana la doonayey in Burundi ay horkacaan C/Qaadir Cali Cumar,Goobaalle,Cabdi Qaybdiid iyo Kaaba mooryaano kale.
Akhriste xusuusnow qeybtan 2-aad waa inta uusan dhicin qorshihii fashilmay ee Waqooyiga.
Beesha Habar Gidir way laba labaysay waxayna codsadeen in qorshaha dib loogu dhigo iyagoona ku cudur daaranayey in dhaqaalihii Howlgalku uu weli ka dhiman yahay iyo dhanka kale iyadoo aan Jagooyinka Beesha ee dowladda uusan fadhiyin sida C/qaadir Cali Cumar oo xilkiisa mugdi ku jiro iyo C/raxmaan Cabdi shakuur oo aan isna xil haysan.
Isjiid Jiid dheer ka dib waqtigii Howlgalka ayaa lagaaray waxaana la waayey cid ciidanka Burundi u hogaamisa Hodon iyo Hawl Wadaag oo ay ku xooganyihiin ciidamada Xisbul Islaam iyo Xarakada Shabaabul Mujaahidiin, Horjooge Goobaalle ayaa codsaday in qorshaha dib loo dhigo.
Qorshahan weli waa lala foolanayaa waxaana loo badinayaa in maalmaha soo socda uu dhaco, saraakiil Madaxtooyada ka tirsan ayaa xogtan u soo gudbiyey SomaliMeMo waxayna sheegeen in ay jiraan ciidamo taabacsan DKMG ah oo uu ku sugan goobaha ay Mujaahidiintu maamulaan oo wax ka fulin doona qorshahan marka sida ay sheegeen “la soo jebiyo” Mujaahidiinta deegaanada Habar Gidir ku sugan sida ay sheegeen.
Ciidamadani ma ahan kuwo cusub ee waa ciidamo qaab beeleed u abaabulan balse magaca Xisbul islaam ku degan xeryo ku yaal deegaanada ay Mujaahidiintu maamulaan, ciidankan dhabar jebinta Mujaahidiinta loogu talagalay ayaa hadda jooga waxayn wataan cimaamado, dagaalada Muqdisho inteeda kale ka socdana kama qayb galaan.
Sarkaalkan ka tirsan Madaxtooyada oo ay SomaliMeMo weydiisay in ay Mujaahidiintu ka warqabaan ciidamadan dhaxdooda ku qarsoon waxana uu jawaabay haa oo way ka war qabaan.
Deegaanada Beeshan Habar Gidir degto ayey DKMG-ka ahi ku sheegtay in ay dad badan oo qarsoon ku leeyihiin kuwaas oo dagaalka ka caawin kara marka uu goobahaas soo gaaro ayaga oo dhanka kale sheegay in deegaanada ay beesha Mudulood ka degto magaalada ee ay Mujaahidiintu maamulaan ay ka duwan sidaasi waani midda soo dedejisay Allaah ka dib in uu fashilmo qorshihii cadawgu ka lahaayeen.
AMISOM oo ku jabtay dagaalada Muqdisho ayaa doonaysa in ay qaab beeleed u dagaal geliso saraakiisha DKMG-ka ah oo muddo sanad ah ku celcelinayey dagaal aan Muqdisho ku qabsano ayaan qaadaynaa.
Dhanka kale warar aan laxaqiijin karin ayaa sheegaya in Max’med Macalin Xogheyaha arrimaha Dibadda ee Xisbul Islaam uu ku suganyahay magaalada Nairobi dalka Kenya halkaas oo uu kulamo kula leeyahay waxa loogu yeero Beesha caalamka waxaana laqal qaalinayaa in uu galo booskii Indha cadde kuna biiro DKMG ah.
Hogaamiyaha Xisbul Islaam Sheekh Xasan daahir Aweys ayaa shaxdan dusha ka eeganaya mana muuqdaan qorshayaal uu ku kala shaandhaynayo ciidanka la sheegay in ay magaca Xisbigiisa ku joogaan deegaanada ay Mujaahidiintu maamulaan.
FG: Kalimadaha Qabiilka ee ku qoran Warbixintan waa sidii aan ku helnay xogta, SomaliMeMo wax u gaara ma ahan.
Isha Warka Somalimemo.net
« Mudaaharaadyo ka dhan ah Mactab Caabudka Ee AMISOM iyo xukuumada ridada uu hogaamiyo murtad shariif sh axmed laguna soo dhawaynayo guulihii Mujaahidiinta oo Muqdisho ka socdo. Isku soo bax aad u ballaaran oo looga soo horjeedo Duullaanka Gaalada laguna Taageerayo Mujaahidiinta oo maanta Muqdisho ka dhacay(Daawo Sawiro+Cod). »
Abu hanifa, on Agoosto 18, 2011 at 2:03 b said:
Asc dhaman mujahidinta waxan leyahay ajar alaha idinkasiyo jihadka ad kujirtan madama dalka u ku jiro gumesi shisheye gesiyasha islamka waxan leyahay wada hakadalina jihadka barakeysan olagulajiro galada adunka
Asmo22, on Janaayo 26, 2012 at 6:16 g said:
Allaahu akbar alcizatu lilaahi walirasuulihi salalaahu cayhi wasalam walil mu’miin insha’allah Alle ayaa fashiliyay hada fashilindona dhagartodaومكرو ومكرالله والله خيرالماكيرين.insha’allah waxan baaq udiraya walaalaha mujaahidinta kadigtonada dhagarta galad iyo gaala raacyada kufarta waxan leenahay duulanka aadsooqaaden wadkujabidoontan bi’idnillahil baari guusha iyo gacantasare waxay udambayni islaamkaوالعاقبت للمبقين
cabdixakiin, on Abriil 23, 2012 at 4:38 g said:
mujaahidiinta nuurkooda waa jirayaa ilaa yoomal qiyaamaha walow
karihal kafiruun wabilaahi tawfiiq
Cilmi, on Abriil 26, 2013 at 5:22 g said:
Waxan helay xog ku aadan dhismo wayn oo difaac ah oo laga dhisaayo deeganka xaawo cabdi si caqabad ay ugu noqoto mujaahidinta loona xadido in ay mujaahidinta ka fuliyan wada hormarta deegan kaasi kamiino waxana dhismahaasi qarash galinaya Drs.xaawo cabdi dhiblaawe ayaado ku andacoonayso waliba in ay mar hore shabab dhulkeda si boob ah dad kale ugu xukumayn hadana aysan daynen sidas dartedna ciidamada qaranka ugu dheeqday dhismooyin xaafisyo ah iyo xabsi ku siimeel gaar ah oo ku dhaxyaala isbitaalka kaasoo dadka looga qaato madax furyo waa war xaqiiqo ah idinkaba booqda
Lii yare, on Maarso 15, 2015 at 7:34 g said:
Asc dhamaan mujaahidiin meel walbo oo aad joogtaan ajarna allaha idiinka siiyo dagaalka aad gumeysiga kula jirtaa guushana allaha idiinka siiyo codowga iyo colooshood ushaqeystayaasha iyo munaafiqiinta aamiin allahu ixsihim cadadaa waqtulhum badadaa walaa tuqaadir minhum axadaa aamiin